लकडाउन खोलेर जनजीवन यसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ : #Covid19 • Health News Nepal
संसारका जल, थल तथा नभमा रहेका पृथ्वी ध्वस्त गर्ने क्षमता रहेका हतियार एबम कमाण्डोहरू अहिले आँखाले देख्न नसक्ने नाथे भाइरससंग माघको जाडोमा जस्तै थुरथुर कामिरहेका छन् ।लाखौँ व्यक्तिको निधन भएको छ भने विश्व अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ, बीसौं करोड नागरिकको रोजगारी गुमेको छ ।
– नेपालमा लकडाउन भएको २ महिना नाघिसकेको छ।लकडाउनको उपलक्ष्यमा सुरुसुरुमा देखिएका भोज र मोज अहिले चिन्ता र सोंचमा परिवर्तन भएकाछन् । सम्भ्रान्त बर्गको ब्यबसाय चौपट भएर हात उठाउने स्थितिमा पुगेका छन्, मध्यम बर्गका व्यक्तिहरु न मागेर खान सकेका छन्, न कमाएको बाँकी रहेको छ भने निम्न आय भएका व्यक्तिहरु रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्तामा आधा पेट खाएर प्राण धानेका छन् ।
– कोरोना संक्रमणको आयु लामो समय भएको बिभिन्न अध्ययनले बताएका छन् । संसारमा फैलिएका भाइरल रोगहरु जस्तै एचाइभी / एड्स, स्वाइन फ्लु, बर्ड फ्लु आदिको ठोस औषधि वा खोप अहिलेसम्म आएको छैन । एचाइभी / एड्सको उमेर ४० बर्ष पुगेको हामीलाई अवगत नै छ, अन्य भाइरल रोग पनि कम उमेरका छैनन् । अहिले कोरोना भाइरसमा चलाइएक औषधि ‘ घ्युको अड्को तेलको धुप ‘ मात्र हुन् । बिज्ञान रन्थनिएर कहिले मलेरियाको औषधिको शरणमा पुगेको छ त कहिले इबोलाको औषधिको शरणमा । कहिले जापानी इन्फ्लुएन्जाको शरणमा पुगेको छ त कहिले सार्स/ मर्स रोगका दवाइको शरणमा । त्यति मात्र हैन गाँजा, तितेपाती, गुर्जो, बेसार, मुलेठीदेखि जुम्राको औषधि आइभरमेक्टिनसम्म बिज्ञान दौडिरहेको छ । खोप निर्माणको लागि संसारका १०० भन्दा धेरै प्रयोगशालामा तालु खुइलेहरु ‘ ट्रयाल एण्ड इरर ‘ मा पसिना निकालिरहेका छन् । कोरोना संक्रमण बिरुद्धको खोप कहिले आउँछ ? हामीले कहिले पाउँछौ ? यी प्रश्नको उत्तर पाउन १-२ बर्ष वा अझै बढी लाग्न सक्छ ।
रोग वा खोप ७० % भन्दा धेरै जनसंख्यामा फैलिएर बाँकी ३० % जनसंख्यालाई हर्ड इम्युनिटी हुने परिकल्पनामा पुग्न हामीले लामो र खतरनाक बाटो हिंड्नुपर्ने हुनसक्छ | तसर्थ अबको हाम्रो बाटो भनेको यो भाइरसलाई छल्दै हाम्रो जनजीवन सहज बनाउने हो ।
कसैले कोरोना संक्रमणलाई फ्लु अर्थात रुघाखोकीसंग तुलना गरेका छन् भने हाम्रो समाजमा कोरोना संक्रमण भयो भने मरिहालिन्छ भन्ने भ्रम रहेको छ । यी दुवै अतिबादी सोंचाई हुन् ।सामान्य रुघाखोकी लागेको १ जना व्यक्तिले औसत १.३ जनालाई फ्लु सार्न सक्छ भने कोरोना संक्रमित १ जनाले औसत ३ जनालाई रोग सर्न सक्छ । १ जनाले १.३ जनालाई, १.३ जनाले अर्को १.३ जनालाई गर्दै १० पटक यो चक्र पुग्दा १४ जनामा फ्लु सर्छ भने कोरोना संक्रमण १ जनाले ३ जना, ३ जनाले ९ जना, ९ जनाले २७ जना हुँदै १० पटक यो चक्र घुम्दा ५९ हजार ४९ जनालाई कोरोना संक्रमण सर्न सक्छ । तसर्थ हामी सबै गम्भीर भएर यो भाइरसको गुणन तोड्न सजग हुनु जरुरी छ ।
यी अवस्थाको बाबजुद हामीले लकडाउन गरेर घरमा बस्ने क्षमता हामीसंग छैन । अबको बिकल्प भनेको सुरक्षा र रोकथामका उपाय अपनाएर आफ्नो काम गर्ने नै हो । ६ फिटको व्यक्तिगत दुरी, मास्क / चस्मा / पंजा / आउटर ड्रेसको प्रयोग, साबुनपानीले हात धोइरहने तथा भीडभाडमा नजाने नै हो | जनजीवन सुरक्षित र सहज बनाउन तलका उपाय अबलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
– खाली भएका पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक भवन तथा खेलकुद स्थानलाई भाडामा लिएर त्यहाँ मजदुर बस्ने ब्यबस्था मिलाउने ।उनीहरुलाई बसमार्फत कलकारखानामा पुर्याएर उद्योग संचालन गर्ने | सम्भव भए उद्योगमा आबासीय ब्यबस्था मिलाउने । भौतिक दुरी कायम गर्ने । मास्क अनिबार्य गर्ने ।
– संक्रमित क्षेत्र शिल गर्ने | ग्रीन जोनबाट लामो दुरीका बस सुरु गर्ने । यसो गर्दा माथि भनेका तरिका अपनाउने । बाटोमा खानको लागि खाना आफैले लिएर जाने वा खानाको प्याकेट किनेर भौतिक दुरी कायम गरेर खाने ।
– आन्तरिक हवाइजहाज ग्रिन जोनबाट चलाउने | प्लेनलाई प्रत्येक पटक संक्रमण रहित बनाउने । यात्रुलाई मास्क, पंजा, भाइजर तथा स्यनिटाइजरको ब्यबस्था गर्ने | लगेजलाई बाहिरबाट संक्रमणरहित बनाउने ।
– स्कुल भर्ना पैदल दुरीमा गर्ने ब्यबस्था मिलाउने । यो सम्भव नभए स्कुल बसलाई संक्रमणरहित बनाउने, भौतिक दुरी कायम गराउने, मास्क / चस्मा / पंजा / स्यानिटाइजर अनिबार्य गर्ने ।एउटा सेसनमा ३० जना बिद्यार्थी हुन्छन् भने १५ जनालाई १ दिन र १५ जनालाई अर्को दिन छुट्टी दिएर भौतिक दुरी कायम गर्ने ।कुनै बिध्यार्थिलाई रुघाखोकी लागेमा, ज्वरो आएमा घरमै बस्न लगाउने । बिद्यालयमा सौचालय थप्ने । सफा गरिरहने । साबुनपानी तथा स्प्रिट कपासको ब्यबस्था गर्ने । सामुहिक प्रार्थना नगर्ने । ५० % बिद्यार्थी आउँदा स्कुलको कोरिडोर, सौचालय तथा प्रांगणमा भिडभाड हुँदैन । स्कुलमा धेरै स्पेस भए अस्थायी संरचना बनाएर कक्षा कोठा थप्ने । कलेज पनि यसै गरि संचालन गर्ने ।
– कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिदैमा अस्पताल भर्ना नगर्ने ।होम आइसोलेसन तथा होटेल आइसोलेसनको ब्यबस्था गर्ने ।घरमा बाताबरण नभएमा सामुदायिक भवनमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउने । संक्रमित मध्ये ९० % लाई सामान्य लक्षण देखिन्छ, नदेखिन पनि सक्छ । संक्रमितलाई ज्वरो, खोकी, पखाला आदि भएमा आफैले कुन कुन औषधि कति मात्रा र समयमा खाने भनेर सुचित गर्ने । संक्रमित मध्ये ९० % अस्पताल नजाने परिस्थिति निर्माण गर्न सकेमा अस्पतालमा भीडभाड हुँदैन । १० % गम्भीर बिरामीलाई कोरोना अस्पतालमा उपचार गर्ने ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने सम्भावना कम हुन्छ ।अन्य रोगका बिरामीले सजिलोसंग उपचार पाउँछन् । अस्पतालमा भीड नहोस भन्नको लागि टेलिफोन वा इन्टरनेटबाट नाम लेखाउने, पालो र समय लिने अनि त्यहि समयमा अस्पताल जाने ब्यबस्था गर्ने ।
कोरोना भाइरसको घातक प्रभाव कम छ । एकजना व्यक्तिले धेरै व्यक्तिलाई सार्न सक्दैन । संक्रमितसंग छुंदैमा, छोंटो कुराकानी गर्दैमा, संक्रमित बसेको ठाउँमा बस्दैमा कोरोना संक्रमण सर्छ भन्ने छैन । सर्नको लागि भाइरसको संख्या र एक्सपोजर समय धेरै भएमा मात्र सर्न सक्छ । त्यस्तै सिंगापुरको नेसनल सेन्टर अफ इन्फेक्सियस डिजिज एण्ड एकेडेमी अफ मेडिसिनको संयुक्त अध्ययनले बताएको छ कि संक्रमण भएको ११ दिनसम्म रोग सार्न सक्ने क्षमता हुन्छ । १२ दिनपछि परिक्षणमा पोजिटिभ देखिए पनि रोग सार्न नसक्ने सो अनुसन्धानले बताएको छ ।अनुहारतिर फर्केर खोकेमा, हाच्छ्युं गरेमा वा चिच्याएमा सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । अन्यथा सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यस्तै वासिंगटन पोस्टले जनाए अनुसार खाध्य पदार्थ तथा सतहबाट रोग सर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । वासिंगटन पोस्टले लेखेको छ, कोरोना भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने भएकोले भौतिक दुरी कायम गर्दा धेरै सुरक्षित भइन्छ । बिभिन्न निकायका अलग अलग उद्देश्य हुनसक्छ । तसर्थ भयानक र नकारात्मक सूचना आउंदैमा भयातुर हुनु जरुरी छैन । त्यस्तै संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै जाँदा हामी डराउनु हुँदैन । विश्वभर यो संख्या बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी पनि मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्दछ । हामीले उच्च स्तरको सुरक्षा अभ्यास गर्यौं भने कोरोना भाइरससंगै आफ्नो जीवनचर्या संचालन गर्न सक्छौं । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि हाम्रो आहार, बिहार, आचार र ब्यबहार स्वस्थ हुनु जरुरी छ । सरकारले PCR परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमितलाई चामलमा बियाँ खोजेझैँ खोज्ने, आइसोलेसनमा राख्ने र गुणस्तरीय उपचार गर्ने काम निरन्तर अघिं बढाउनुपर्दछ।
#public Health #corona-virus # family planning
Pingback: बर्ड फ्लूबाट जोगिने उपायहरु #BirdFlu • Health News Nepal